Tontolon’ny Bilaogy Soahily (Swahili): Feon’ny Fahendrena, Asa Fampandrian-tany Ary Ilay Mpanjaka Farany Tany Ekaosy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2017 4:55 GMT
Natao tany Zanzibar tamin'ity herinandro ity ny fetibe Sauti za Basura 2007 fanao isantaona (Fetiben'ny Mozika Feon'ny Fahendrena), nireharehanà andiana mpanakanto avy any Afrika atsimon'i Sahara ary koa avy any Eoropa.
Entin'ilay voalohany mpitoraka bilaogy an-tsary any Tanzania, Issa Michuzi, isika hitety ilay fetibe ary anomezany voninahitra manokana an'i Bi Kidude, ilay olona 95 taona nahazo ny lokan'ny WOMEX fifaninankira iraisampirenena. Manaraka an'i Bi Kidude eny an-tsehatra sy any ambadiky ny sehatra miala voly miaraka amin'ireo mpankafy izy. Manana karazany maro amin'ireo lahatsarin'ilay fetibe ny Busara Live.
Mrocky mpitoraka bilaogy an-tsary iray hafa no mandefa sarinà andiana miaramila Tanzaniana vonona hanainga ho amin'ny asa fampandrian-tany voalohany ataon'izy ireo any ivelan'i Afrika. Nanatevina laharana ny Tafika Vonjimaikan'ny Firenena Mikambana any Lebanona (UNIFIL/FINUL) izy ireo.
Mandefa sarinà vehivavy miaramila 10 izay anisan'ireo 77 mandeha any Lebanona i Abou Salim, ary miteraka sahoan-dresaka any anatin'ireo fizaràna fanehoankevitra hoe ity angamba no fiandohàn'ny vanimpotoana izay handraisan'ny vehivavy anjara sy hitazonan'izy ireo toeran'ny mpitarika ao amin'ny toerana nanjakàn'ny lahy taloha ary manamarika ny fiafarana, firodànan'ny fitondran'ny lehilahy:
Ary satria ny fandrotsahana iray lavitrisa Shillings Tanzaniana amin'ny faritra tsirairay dia natao ho toy ny fanomezaha hery ny politikan'ny governemanta amin'ny alalan'ny fampindramambola madinika, manahy i Charahani raha toa hampitony ny fahantrana ilay fampindramambola.
Vao haingana, ilay Keniana Soahily mpitoraka bilaogy, Maitha, nijery ny horonantsary, Ilay Mpanjaka Farany tany Ekaosy. Nanoratra toy izao izy,
Taterin'i Kibinango fa taorian'ny nanakanan'ny governemantan'i Zanzibar ny fampiasana ny finday any an-tsekoly tamin'ny filazana fa mampirisika ny fitondrantena ara-nofo tsy mendrika ireny, nanapaka hevitra ihany koa izy (ny governemanta ao Zanzibar) ny hanakana ireo mpianatra tsy handeha any amin'ny efitrano fandihizana. Mandresy lahatra ny governemanta fa izany fitondrantena izany no mitarika any amin'ny fitondrantena tsy mendrika ary iray amin'ireo antony ao ambadiky ny vokatra ratsy omen'ireo mpianatra.
Farany, manohy miresaka ny famoronana ny fikambanan'ny mpitoraka bilaogy ireo Tanzaniana mpitoraka bilaogy. Rehefa avy nanolotra ny anaran'ny fikambanana sy ny rafitry ny fitarihana, ny fifanakalozankevitra amin'izao fotoana izao dia momba ny fanorenana ilay fikambanana. Ny iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ny adihevitra hatreto dia ny fisafidianana izay ho mpikambana. Misy mpitoraka bilaogy mangataka hoe misokatra ho an'ny mpitoraka bilaogy fotsiny, raha ireo hafa kosa mangataka ny hanomezana alalana ireo mpaneho hevitra mavitrika mba ho mpikambana ao.